'म काम गर्ने मान्छे हो, मेरो डिक्सनरीमा अल्छी भन्ने शब्द छैन' (अन्तर्वार्ता)
प्रकाशित मिति : २०७४ मङ्सिर १८ सोमबार , ९,६१८ पटक हेरिएको
काठमाडौं । मंसिर २१ गते देशका ४५ जिल्लामा हुने दोस्रो चरणको निर्वाचन आउन अब ३ दिन मात्र छ । निर्वाचन नजिकिएसँगै काठमाडौंका राजनीतिक दल तथा तिनका उम्मेदवारहरु चुनावी प्रचार प्रसारमा व्यस्त छन् । सबै उम्मेदवारहरु आफ्नो पक्षमा मत बटुल्न आमसभा घरदैलो तथा चुनावी सभामा व्यस्त छन् । काठमाडौंका १० वटै क्षेत्रमा उम्मेदवारहरु चुनावी एजेण्डा र घोषणा पत्र लिएर आफ्नो विजय यात्राका लागि संघर्षरत छन् ।
यसै सन्दर्भमा नेपाली काँग्रेसका नेता प्रकाश शरण महतको पनि चुनावी प्रचार अभियान अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यस अघि काँग्रेस नेता नरहरि आचार्यले चुनाव जितेको काठमाडौं क्षेत्र नं ५ मा अहिले काँग्रेस नेता महत चुनाव लड्दैछन् । दुर्इपटकसम्म काँग्रेससँग हारेका एमाले महासचिव र्इश्वर पोखरेल प्रतिस्पर्धीका रुपमा रहेको सो क्षेत्रमा महतको एजेण्डा के छ त रु उनीसँग गरिएको कुराकानी ।
निर्वाचन त आइसक्यो के कस्तो तयारी गरिरहनुभएको छ ?
अहिले जनताको घर दैलोमा जाने काम भइरहेको छ । उहाँहरुको कुरा सुनिरहेको छु । उहाँहरुका गुनासा, समस्या र मागका बारेमा अहिले सुन्ने काम भएको छ । जनताको घरैमा पुगेर उनीहरुको सुझाव र सरसल्लाह पनि लिएको छु । हुनत यो क्षेत्र मलाई नयाँ होइन किनभने म करिब ३५÷३६ बर्षदेखि नै बाँसबारी क्षेत्रमै बसिरहेको छु । स्कुलदेखि कलेजम्म पढ्दा होस वा पछि घर बनाएर बस्दा पनि मेरो क्षेत्र बाँसबारी नै हो, जुन अहिलेको ५ नम्बर क्षेत्र नै पर्छ । जुन नुवाकोटसँग पनि जोडिएको छ र अधिकांश नुवाकोटका नागरिकको बसोबास पनि छ । त्यही पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र भएकोले मैले जनताको घर घर चिन्न र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको बारेमा र यहाँका समस्याहरुको बारेमा जानकारी होस् भनेर सकेसम्म हरेक जनताको घरमा नै पुगेको छु । यस क्रममा मैले म काम गर्ने मान्छे हुँ भोलिका दिनमा मैले यसै क्षेत्रमा बसेर काम गर्ने हो त्यसैले यो पटकका लागि मलाई जिताएर संसदमा पठाउनुहोस भनेर जनतासँग अपिल गरिरहेको छु । नेपाली काँग्रेसका हरेक कार्यकर्तामात्र होइन कि लगभग सबैजसो सुसूचित एवम् जागरुक युवाहरुले पनि राम्रो ‘रेस्पोन्स’ गर्नुभएको छ । मलाई लाग्छ वातावरण राम्रो बनिरहेको छ । अहिलेसम्म हेर्दा मेरो जित निश्चितै छ ।
नेपाली काँग्रेसलाई जनताले किन भोट दिने ?
हेर्नुहोस, मत नेपाली काँग्रेसबाहेक अरुलाई किन भोट दिने भन्छु । नेपाली काँग्रेसले यो देशमा लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारका लागि के गरेको छैन भन्नोस् न । विसं २००७ मा प्रजातन्त्र कसको नेतृत्वमा आयो ? हुनत कतिपय मानिसले हिजोआज काँग्रेसले पुरानो ब्याज खाएर बसेको छ पुरानोमात्र कुरा गर्छ पनि भन्छन् तर के त्यस समयको पिछडिएको समाज र क्रुर राणा शासनका विरुद्धमा लडेर प्रजातन्त्र ल्याउने भनेको सामान्य कुरा थियो र ? विसं २०४६ मा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि पनि त आखिर काँग्रेसले नै लडेको हो । त्यसपछि २०६२÷६३ आन्दोलनको नेतृत्व कसले ग¥यो ? यी त भए ल पुराना कुरा । आज यो देशमा प्राप्त भएका समग्र उपलब्धिहरु काँग्रेस नभएर कस्का कारणले आए त ? संविधान सभाको निर्वाचन, त्यसमार्फत संविधान लेखन र अहिले आएर यो संघीयतामा देशलाई लाने कुरा । हामीले नै २० बर्षसम्म हुन नसकेको स्थानीय तहको निर्वाचन गरायौँ ।
जातजाति, दलित, महिलालगायत सबै क्षेत्र र बर्गको समावेशिताको सुनिश्चिततामा काँग्रेसकै हात छ । त्यतिमात्र नभएर शान्ति प्रक्रियामा माओवादीलाई ल्याउने, नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना गर्ने र संसारकै एक उदाहरणीय रुपमा नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई यहाँसम्म ल्याउने काम गरेको काँग्रेसले नै हैन र ? अब भोलिकादिनमा संघीयतामा मुलुकलाई लैजानका लागि पनि काँग्रेसकै अगुवाई आवश्यक छ । अनि काँग्रेसलाई भोट नदिएर कसलाई दिने त ?
चुनावका लागि नुवाकोटबाट काठमाडौँ आएको भन्नेहरुलाई के भन्नुहुन्छ ?
त्यसो भए र्इश्वर जी कहाँको नि सोध्नुस् त । मत यही क्षेत्रमा बसेको आज ३६ बर्षभन्दा बढी भयो । मैले ११ बर्षको उमेरमा लैनचौरको शान्ति विद्यागृहमा ६ कक्षामा भर्ना भएर यहीँ पढेको हो । त्यतिबेलादेखि नै मेरो बसाई भनेको बाँसबारी नै हो । त्यसपछि कलेज पढ्दा होस अथवा भनौँ न म काठमाडौं बस्दा यही क्षेत्रमै बसी आएको छु । मेरो घर नै बाँसबारीमा छ । मलाई यही घरदैलोमा जाने क्रममा कतिपयले यो क्षेत्रका लागि के गर्नुभो भनेर पनि सोध्ने गरेका छन् । यो क्षेत्रका कैयौँ व्यक्तिका तथा संस्थागत रुपमा पनि मैले धेरै काम गरेको छु । काँग्रेस कार्यकर्ताहरु मात्र होइन यो क्षेत्रका सबै नागरिकका लागि मेरो घरको दैलो सधैँ खुलै थियो र उहाँहरु आउने गर्नुहुन्थ्यो र आइरहनुभएको छ ।
फेरि अर्को कुरा के पनि हो भने यो क्षेत्रको जिम्मा पार्टीले यसअघि नरहरिजीलाई दिएको थियो । त्यसैले पनि मैले धेरै चासो लिने वा चियाउने कुरा पनि थिएन । तर पनि म यही क्षेत्रको बासिन्दा भएको हैसियतमा मकहाँ आउने सबैलाई विगतमा पनि मेरो घरको ढोका खुलै थियो । मैले उहाँहरुका लागि गर्नहुने र सक्ने काममा कुनै कन्जुस्याईँ हिजो पनि गरेको होइन । अबत झन कुरै भएन, राजनीतिक रुपमा पनि म यही क्षेत्रको भएँ । अब त यो क्षेत्र पार्टीले मलाई नै जिम्मेवारी दिएको छ । त्यसैले मैले यहाँका हरेक समस्या र आवश्यकताको बारेमा जानकारी राख्नुपर्छ र समाधानका लागि लाग्नुपर्छ । म लाग्छु र गर्छु पनि । हेर्दै जानुस् म काम गर्ने मान्छे हो, मेरो डिक्सनरीमा अल्छी भन्ने शब्द छैन, यो क्षेत्रलाई मैले नमूना क्षेत्रका रुपमा विकास गरेर देखाउँछु ।
अहिले तपाईको क्षेत्रका लागि चुनावी एजेण्डा के छन् ?
हेर्नोस् काठमाडौंको ५ नम्बर क्षेत्र धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय एवम् अरु धेरै हिसाबले पनि निकै महत्वको र सम्पन्न छ । काठमाडौं राजधानी जिल्ला नै भएपनि आजसम्म यो क्षेत्र बत्तीमुनिको अँध्यारोको रुपमा रहेको मलाई महशुस भएको छ । जनताका गुनासा र समस्याहरु धेरै छन् जुन कुरा म यस क्षेत्रका हरेक नागरिकको घरघरमा पुगेर सुनेको छु । त्यसैले यस क्षेत्रको विकासका लागि मैले पनि एक विशिष्ट खाका मेरो दिमागमा कोरिसकेको छु । यहाँ बुढानीलकण्ठजस्तो हिन्दू धर्मको एक पवित्र र सुप्रसिद्ध तीर्थस्थल छ । तर यसको समयानुकुल विकास गर्न सकिएको छैन । एक पवित्र देवस्थल तथा धार्मिक तीर्थस्थलका रुपमा मैले बुढानिलकण्ठको विकासको योजना बनाएको छु ।
त्यसैगरी माथिको शिवपुरी जलाधार क्षेत्र पनि अर्को त्यत्तिकै महत्वको क्षेत्र हो । यस क्षेत्रमा मैले ‘जिप राइडिङ’ को रुपमा विकास गर्ने योजना बनाएको छु । जसले गर्दा सो क्षेत्रमा दिनहूँ काठमाडौँका हजारौँ पर्यटक जाने एउटा मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गर्न सकिनेछ । यसले स्थानीय स्तरमा नागरिकको जिवनस्तर उकास्नुका साथै स्थानीय रुपमा रोजगारीको सिर्जना गर्नका लागि पनि ठूलो सघाउन पु¥याउने छ । यसबाट राज्यले बार्षिक करोडौँ रुपैयाँ राजस्व आम्दानी गर्नसक्नेगरी यो जलाधार क्षेत्रको बिकास गर्ने योजना मेरो छ । त्यस्तै रानीबारी अर्को पर्यटकीय महत्वको क्षेत्र हो । यसलाई पनि सार्वजनिक उद्यानका रुपमा विकास गरी ‘बायोडाइभर्सिटी’ क्षेत्रको एक उत्कृष्ट केन्द्रका रुपमा विकास गर्न सकिन्छ ।
त्यसैगरी हाँडीगाउ, सपनतीर्थ, टुँडालदेवीजस्ता परम्परागत, देवस्थल र विशेष क्षेत्रहरुलाई पनि पूरातात्विक, ऐतिहासिक र धार्मिक महत्वका रुपमा जात्रा व्यवस्थापनका साथै क्षेत्रगत विकासका रुपमा धेरै काम गर्नेगरी मैले योजना बनाएको छु । यी स्थल, सम्पदा र परम्पराहरुको विशेष व्यवस्थापन, सञ्चालन र संरक्षण गर्न सकिएमा यस निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकका लागि ठूलो उपलब्धि हुनेछ । टोखा छहरे त्रिशुली केरुङमार्ग अर्को प्राथमिकता हो । नुवाकोटसम्म जोड्ने सुरुङमार्ग मेरो पुरानो योजना हो । साथै यसले भोलिको पुस्तालाई पनि गर्वगर्न सक्नेगरी यस क्षेत्रलाई नमूनाका रुपमा विकास गर्न सकिने छ ।
त्यसैगरी यस क्षेत्रका युवा र बुद्धिजिवी बर्गले पनि मलाई यहाँको विकासका लागि विशेष सल्लाह र सुझावहरु दिएका छन् । सूचना प्रविधिको विकास र यसलाई उद्योगको रुपमा स्थापना र विकास, पर्यटकीय संरचनाको विकास, यस क्षेत्रको खानेपानी, ढल निकास र बाटोघाटोको निकासका बारेमा केही योजनाहरु हामी आन्तरिक रुपमा पनि बनाएका छौँ । म यो क्षेत्रको प्रतिनिधि भएपछि यी सबैलाई ध्यानमा राखेर आगामी पाँच बर्षभित्रमा ती सबैको कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट खाका मैले बनाइसकेको छु ।
तपाईँलाई नै क्षेत्र नम्बर ५ का जनताले किन भोट दिने ?
म १३ बर्षको उमेरदेखि देशमा प्रजातन्त्रको लागि लडेको मान्छे हो । त्यतिबेला देशमा प्रजातन्त्र किन ल्याउनुपर्छ भन्ने बारेमा मलाई के थाहा थियो होला भन्ने कुरा अर्को विषय हो । अब त्यो वि.सं २०४६ भन्दा अघिको त कुरै नगरौँ कति दुःख पाइयो र कसरी प्रजातन्त्रको पुनस्थापनाका लागि लडियो भनेर । अहिले पछिल्लो समयमा पनि म नेपालमा संविधान निर्माणका लागि समेत त्यत्तिकै काम गरेको छु । त्यो भन्दा पनि पहिला माओवादी समस्या समाधान उच्चस्तरीय समितिको सदस्यको रुपमा काम गरेको हो । हामीले नै माओवादी समस्याको समाधान शान्तिपूर्ण रुपमा गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएका हौँ । पछि माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनेदेखि हतियार व्यवस्थापनसम्मका प्राय सबैजसो कार्यदल या समितिहरुमा बसेर मैले पनि काम गरेको छु ।
यो संविधान निर्माणको मस्यौदा कार्यदलमा पनि म बसेर काम गरेको छु । संविधानको मस्यौदा र यसलाई जारी गर्नेसम्मको काममा मेरो पनि पसिना बगेको छ । आखिर नेपाली काँग्रेसले नै त हो यो देशमा संविधान जारी गरेको । पहिलो संधिवान सभा संविधान नै नबनाई विघटन भएको काँग्रेसको सरकार नभएर नै त हो । अनि पछि काँग्रेसको सरकार थियो, उसले संविधान बनायो र जारी गर्यो ।
यसअघि म उर्जामन्त्री हुदा गरेका बिद्युतीकरणको योजना यहाँ अहिले सबै भन्न पनि समय छैन । अघिल्लो सरकारमा म परराष्ट्रमन्त्री हुँदा भारतसँगको सम्बन्ध एकदमै बिग्रिएको थियो । जसका कारण नेपालले पाएको दुःख त यहाँ मैले भन्नै पर्दैन । यस्तो अवस्थामा भारतसँगको सम्बन्धमा सुधार गर्नेमात्र नभएर चीनसँग पनि राम्रो सम्बन्ध राख्ने काम मेरो अथक प्रयासपछि सम्भव भएको हो । मैले दुवैतर्फ सन्तुलित सम्बन्धको विकास गर्ने काम गरेको हो ।
त्यतिबेला भारततिर लम्पसार भएको भनेर पनि दुस्प्रचार गरिएको भए पनि मैले किन सहँे भने त्यो मैले देशका लागि नै गरेको हो । चीनसँगको त्यती ठूलो ओबिओआर आयोजनामा हस्ताक्षर गर्नेसम्मको काम पनि त हामीले नै गरेको हो नि । के नेपालले त्यो आयोजनामा हस्ताक्षर गर्नेकाम सामान्य हो र ? मसँग र व्यक्तिगत रुपमा भन्नुभयो भने भारत र चीनका समृद्धिबाट कसरी हामी लाभान्वित हुने र नेपालले ओबिओआरबाट के कसरी फाइदा लिने भन्ने स्पष्ट भिजन नै छ । तर सरकारमा छोटो समयमात्र रहेकोले यो सबै सम्भव हुन सकेन । तर त्यसलाई भोलिका दिनमा पूरा गर्न सकिन्छ । मेरो भूमिका र दक्षता अब आगामी दिनमा देशको समृद्धिको लागि प्रयोग हुनेछ । नेपालको अबको बाटो भनेको समृद्धिको नै हो भन्ने नै मेरो नारा हो । नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना, विकास र प्रवधर्नमा मेरो पनि ठूलो मेहनेत जोडिएको छ । आउने दिनमा पनि मैले मेरा आश्था र निष्ठालाई अडिग भएर निरन्तरता दिने प्रण गरेकै छु । त्यसैले मैले काठमाडौंका जनतासँग भोट मागेको छु । एकपटक मलाई यहाँबाट संसदमा पुर्याउनुस म सदा तपाईहरुलाई साथ दिनेछु भनेको छु ।
कम्युनिष्ट सरकार आए देशमा अधिनायकबाद लाद्छन् भनेर काँग्रेसले देशव्यापी प्रचार गरिरहेको छ नि ?
हो, सत्य कुरा हो । तर हामीले मात्र भनेका होइनौँ सबै प्रजातान्त्रिक शक्तिले भनेका छन् । फेरि त्यो पनि हामीले मात्र नभएर प्रचण्ड, ओलीजीहरु नै भनिरहनुभएको छ नि । जस्तो कि तपाईले उहाँहरुका भाषण सुन्नुहोस न, अब कम्युनिष्टले यतिबर्ष शासन गर्छ उतिबर्ष गर्छ, अब छोड्दैन आदि भन्नुुहुन्छ । केही दिनअघि प्रचण्ड स्वयं भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब नेपालमा ५० बर्ष बामपन्थीको सरकार हुनेछ । के हो यो भनेको ? कुनै दलले ५० बर्षसम्म शासन चलाउँछ भनेको के सत्ता कब्जा या अधिनायकबाद होइन ? हामी त आउने ५ बर्षका लागि काँग्रेसलाई मत माग्दै छौँ तर उहाँहरुले आगामी कार्यकालका लागि हो कि ५० बर्षलाई हो मत मागेको हो ? माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएको हामीले नै हो ।
उनीहरु पनि बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा विश्वास र अभ्यास गर्छौँ भनेका थिए त्यसैले उनीहरुलाई सरकारमा पनि ल्यायौँ । सबैलाई थाहै छकि हामी देशको ठूलो पार्टी भएर पनि माओवादी नेतृत्वको सरकारमा हामी नै गयौं । यो सबै उनीहरुलाई पनि प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा ल्याउन र देशलाई स्थायित्वको बाटोमा डोराउन हो नि । तर यसरी अहिलेको अवस्थामा नै उनीहरु हिँड्ने हो भने उनीहरुको आगामी बाटो अधिनायकवादको नै हो । नेपाली जनताले पनि यो बुझिसकेका छन् ।
काँग्रेस नेता खुम बहादुर खड्काको शब काठमाडौं ल्याइयो, आइतवार विहान कफिन खोलिने
खड्काको शव ल्याउन ढीलाई हुन सक्ने, श्रद्धाञ्जलीका लागि आइतवार पार्टी कार्यालयमा राखिने
खुम बहादुर खड्कालाई भेटेर फर्केपछिको अनुभुति, इन्फेक्सन नै भयो काल
खड्काको निधन प्रति कांग्रेसले गर्‍यो गहिरो दुःख व्यक्त